IELTS Task II မှာ ဘာလို့ အမှတ် သိပ်မရကြတာလဲ? – SLD EDUCATION
IELTS Writing Task2ဘာလို့ ဒုက္ခရောက်ကြတာလဲ၊ ဘယ်လိုရေးသင့် ပြင်ဆင်သင့်လဲ
(********************************************************************************************************************************************Note: Cambridge က IELTS မေးခွန်းတွေထုတ်သူတွေ၊ အမှတ်ပေးစည်းမျဉ်းတွေထုတ်သူတွေဖြစ်တဲ့ Professorsတွေ၊ Test Writersတွေကိုယ်တိုင်ပေးတဲ့ guidelinesအများကြီးကို ကောက်နှုတ် အတိုချုံးပြီး၊ ကျောင်းသားတိုင်းနားလည်နိုင်ပြီး အသုံးပြုနိုင်အောင် မြန်မာလို ပြန်ရေးပေးရခြင်းဖြစ်သည်…***********************************************************************************************************************************)
Understanding the task (ရေးခိုင်းတဲ့ အပိုင်းတွေကို နားလည်အောင်လုပ်ခြင်း)
Task2ဆိုရင် အမြဲတမ်း statements တစ်ခု (သို့) နှစ်ခုပေးထားပြီး၊ နောက်ထပ်မေးခွန်း တစ်ခု (သို့) နှစ်ခုက လိုက်ပါသည်။ ပေးထားတဲ့ မေးခွန်းတွေကို အကုန်ဖြေရမည့် တာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာကို သတိရပါ။
ရေးရမည့်ခေါင်းစဉ်နှင့် taskကို ကောင်းကောင်းနားလည်အောင် အရင်ကျင့်သင့်ပါတယ်။ ဉပမာ-Technology ဆိုတာနဲ့ “the impact that email communication has had on work life” ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်တွေက အရမ်းကွာပါတယ်။ Technologyဆိုတာ အရမ်းကျယ်ပြန့်လွန်းပြီး သူ့ရဲ့အောက်မှာ ခေါင်းစဉ်ပေါင်း သောင်းခြောက်ထောင်ရှိနိုင်ပါတယ်။ “The impact of technology….” ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်က technology ရဲ့ ကောင်းကျိုး/ဆိုးကျိုးကို တိတိကျကျမေးထားတာပါ။ ကြောင်ကလေးတစ်ကောင်ကြောင့် အိမ်မှာ ကြွက်တွေ ကင်းတဲ့အကြောင်းရေးပါဆိုတာနဲ့ တိရိစ္ဆာန်အကြောင်း အကုန်လုံးရေးခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ သတိရပါ။ အဲဒါကြောင့် statement ကို အသေအခြာဖတ်မှ ၊ နားလည်မှ ရေးရမည့် ခေါင်းစဉ်က ပိုရှင်းသွားမှာပါ။
လုပ်ရမည့်တာဝန်ကိုလည်း မေးခွန်းမှာ (statement)မှာ ပေးထားပါတယ်။ statementမှာ တုန့်ပြန်ရမလား၊ ကိုယ့်ရဲ့ အထင်အမြင်ကို ပြောပြရမလားဆိုတာပေးထားပါတယ်။ လုပ်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းပဲ လုပ်ပါ။
ပေးထားတဲ့ Task တွေက ဗဟုသုတမရှိသေးတဲ့သူတွေအတွက်တော့ တအားခက်နိုင်ပါတယ်။ ဉပမာ-တက္ကသိုလ် မတက်ရသေးတဲ့သူအတွက် statement မှာ “university courses being offered through the internet” ဆိုတဲ့ statementကနေ နောက်လိုက်လာတဲ့ မေးခွန်းက “the benefits of online teaching’ ဆိုရင် အရမ်းခက်ပြီး မတရားဘူးပြောရင်လည်း မမှားပါဘူး။ ဒါကြောင့် IELTS အတွက်စပြင်ပြီဆိုတာနဲ့ topics အမျိုးမျိုးကို လိုက်ဖတ်သင့်ပါတယ်။ Topics တွေလိုက်ရှာဖတ်တဲ့ အချိန်မှာ အလွန်အကျွံ ခက်တဲ့ ဟာတွေကို ရှောင်ပါ။ Onlineက website တွေမှာ ဥပမာပေးထားတဲ့ဟာတွေက တခါလေ မလိုအပ်ဘဲ အရမ်းခက်တတ်ပါတယ်။ တွေ့ရတဲ့ နိုင်ငံရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ တချို့မေးခွန်းတွေဆိုရင် အနောက်တိုင်း နိုင်ငံရေးကို ပညာရှင်တစ်ယောက်ရဲ့ ဗဟုသုတလောက်ရှိမှ ဖြေလို့ရပါတယ်။ ဒါမျိုးမေးခွန်းတွေကို နားလည်ဖို့ ကြိုးစားနေရင် တန်ဖိုးရှိတဲ့ အချိန်တွေပဲကုန်သွားမယ်လေ။ IELTS စာစစ်တဲ့သူတွေက နိုင်ငံရေးအကြောင်း နက်နက်နဲနဲသိလားဆို စိတ်မဝင်စားပါဘူး။ နိုင်ငံရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နည်းနည်းပါးပါးသိတာလေးကိုသုံးပြီး ထိထိရောက်ရောက် ရေးတတ်သလား ဆိုတာကိုပဲသိချင်တာပါ။
Native speakers တွေအတွက်ကော် IELTS ကလွယ်သလား?
Writing မှာတိုင်းတာချင်တာက တက္ကသိုလ်ရောက်ရင် (သို့) အလုပ်ခွင်မှာ လိုအပ်တဲ့ English skills ရှိသလားဆိုတာကိုပါ။ ဒါကြောင့် နိုင်ငံတကာကျောင်းတွေမှာ Final High School (၁၂တန်း/ A level exam)မှာသင်ပေးတဲ့ English skills မျိုးက ရှိကိုရှိရမှာပါ။ ဥပမာပြောရရင် English ကို မိခင်ဘာသာစကားအနေနဲ့ ပြောနေရတဲ့သူတွေတောင်မှ 12တန်းမှာသင်ပေးတဲ့ Economics ဘာသာအတွက် ၂နာရီစာမေးပွဲအတွင်း essays အများကြီးရေးရတဲ့အချိန် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း၊ ထိထိရောက်ရောက်ရေးဖို့ဆိုတာက တော်တော်ခက်ပါတယ်။ ဒီလိုပါပဲ သူတို့‌တွေကိုIELTS ဖြေခိုင်းမယ်ဆိုရင်လည်း အခက်အခဲတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် English စာတော်တိုင်း စနစ်တကျမပြင်ထားရင် ဘယ်သူမှ IELTSကို အမှတ်ကောင်းမရနိုင်ပါဘူး။
Responding to ‘different types’ of questions (မေးခွန်းအမျိုးစားများနဲ့ မေးခွန်းအလိုက်ဖြေနည်းများ)
တချို့ကformulaနဲ့ shortcut နဲ့ မေးခွန်းပုံစံ ၄မျိုး၊၆မျိုး ပုံစံနဲ့လေ့လာသင်ယူကြတယ်။ဒီလိုမျိုး လေ့လာရင် အများအားဖြင့် ၆.၅ ပဲရပါမယ်။
တချို့က “opinion essays”, “discussion essays”, “argument essays” ဘာညာနဲ့ ခွဲသင်တတ်ကြပါတယ်။ Native teachers အများစုကလည်းအဲသလို မှားယွမ်းတဲ့ အတွေးအခေါ်တွေထဲမှာ နစ်နေတတ်ကြပါတယ်။ ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက်လည်း ဦးနှောက်ခြောက်စရာတွေဖြစ်ရပါတယ်။ ဒီလိုခွဲသင်တာဟာ မှားပါတယ်။ ထပ်ပြန်ပြောမယ်- မှားပါတယ်။
Task2writing ကို discursive essay လို့ကြည့်သင့်ပါတယ်။ Discursive thinking/writing ဆိုတာက ကိုယ့်ရဲ့ ideasတွေနှင့် ကိုယ့်ရဲ့ ရပ်တည်မှုတွေကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း၊ အချက်ကျကျရေးပြီး တင်ပြတတ်ရပါမယ်။ ရှင်းရှင်းပြောရရင် အရှိကိုရှိအတိုင်းရေးရမည့်အချက်တွေ နှင့် ကိုယ့်ရဲ့ ထင်မြင်ယူဆချက်တွေကို ရောပြီး (a careful blend of both objective discussion and opinion ) ထိထိရောက်ရောက်၊ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ရေးရတာပါ။
Opinion vs. discussion ဆိုပြီးတချို့လူတွေသင်ပေးတဲ့ပုံစံလေးတွေကို ကြည့်ကြည့်ရအောင်။ Opinion essay ဆိုရင် တစ်ဖက်ထဲကို ဦးစာပေးငြင်းရေးရမယ်တို့ဘာတို့ပြောကြပါတယ်။ ဒါကမမှန်ပါဘူး။ To what extend do you agree or disagree ဆိုတဲ့ မေးခွန်းမျိုးမှာ ဘာဖြေခိုင်းတာလဲဆိုရင် ပေးထားတဲ့ issueကို logical way (ရုပ်တိရှိရှိ)နဲ ကိုယ့်ရဲ့ ရပ်တည်ချက်ကို ဘယ်လောက်အတိုင်းအတာရှိတယ် (the extent of your postion)ကို ရေးခိုင်းတာပါ။ ရိုးရိုးပြောရရင် သင့်ရပ်တည်ချက် (your position) က strong agreement လား၊ strong disagreement လား၊ ကြားထဲမှာ (something in between) လားရေးရပါမယ်။ သုံးမျိုးလုံးရပါတယ်။
တခြား Writing task2 questions တွေလိုပဲ ပေးထားတဲ့ issuesတွေကို နားလည်ကြောင်း ဆွေးနွေးပေးရမယ်။ issues နှစ်ခုထဲက တဖက်နဲ့ပိုသဘောတူလို့ နောက်တစ်ဖက်အကြောင်းကို မဆွေးနွေးသင့်ဘူးဆိုတာမှားပါတယ်။ မတူညီတဲ့ ထင်မြင်ချက်နှစ်ခုကို ပေးထားတယ်ဆိုရင် နှစ်ဖက်စလုံးကိုဆွေးနွေးပေးရမယ်။ မလုပ်ပေးရင် Band 6လောက်ပဲရပါမယ်။
Discussion essay ဆိုပြီးတချို့လူတွေ သင်ပေးတဲ့နေရာမှာလည်း အလားတူပြဿနာရှိပါတယ်။ ဒါမျိုး essayမှာ “Opinion”ထည့်မရေးသင့်ဘူးဆိုပြီး the so-called online experts တွေက အတည်အပေါက်ကြီးကို ပြောထားတော့ လူတော်တော်များများက လိုက်ပြီး ကျင့်သုံးကြတော့ အရမ်းတော်တဲ့ ကျောင်းသား/သူတောင် 6.5 အများဆုံးပဲရကြရတယ်။ ဘာလို့မှားလဲဆိုတော့ ရေးတဲ့သူက သူ့ရဲ့ Position (ရပ်တည်ချက်)ကိုမထည့်လိုက်လို့ Task response မှာဒုက္ခရောက်သွားတာဖြစ်လို့ပါ။ Essayမှာရှိသင့်တဲ့ အင်္ဂါတစိတ်တပိုင်း မပါတော့လို့ပါ။ Essayတိုင်း Essayတိုင်းမှာ သင့်ရဲ့ Positionကို လုံးဝလုံးဝ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအမြဲပါရပါမယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ position ကို introduction and/or conclusion ပိုင်းမှာထည့်ပေးတာနဲ့ မလုံလောက်ဘူးဆိုတာလဲမမေ့ပါနဲ့။ Body Paragraphs တွေမှာလည်း ရှင်းနေရပါမယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ Positionက မရှင်းဘူဆိုရင်လည်း အမှတ်ကောင်းရဖို့ ခက်ပါမည်။ ရှုပ်ထွေးတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို တိုတိုတုတ်တုတ်၊ ထိထိရောက်ရောက်ရှင်းပြတတ်ဖို့က vocabulary နှင့် grammar တွေကလည်းအရေးကြီးပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ မေးခွန်းအမျိုမျိုးရှိတဲ့ဟာကို label အမျိုုးမျိုးတတ်ခေါ်လို့မရဘူးလား?
မကောင်းပါဘူး။ ကျောင်းသားတစ်ယောက်က essay ရေးရမည့်ဟာကို “labels” တွေ၊ “rules” တွေနဲ့ ကိုက်အောင် ဘယ်လိုရေးရမလဲဆိုပြီး စဉ်းစားတာနဲ့ တော်တော်အချိန်ကုန်သွားပါလိမ့်မယ်။ ရေးရမည့် Essayက academic field တွေမှာသုံးတဲ့ formal ကျကျရေးရတဲ့ Discursive essay၊ ကိုယ့်ရဲ့ positionကို အမြဲထည့်ရမယ် ဆိုတာကိုပဲ သတိရပါ။
ကျောင်းသားတိုင်းလေ့ကျင့်သင်တာကတော့ variety of language, topics and questions ပါ။ ဒါမှ ကိုယ်ရဲ့ language range က ကျယ်ပြန့်လာမယ်။ ကျင့်တဲ့ အချိန်မှာပါသင့်တဲ့ တာဝန်တွေကတော့
discuss the problems associated with an issue and suggest possible solutions
• discuss and evaluate the advantages and disadvantages of something
• discuss one or two opinions (of others) onatopic and give your own opinion
• discuss the possible causes ofaproblem and the effect it has
ဆိုပြီး ပုံစံ အမျိုးမျိုးနဲ့ ကျင့်ပေးပါ။ ပုံစံတစ်မျိုးထဲ formula တစ်မျိုထဲနဲ့ မကျင့်ပါနဲ့။
Thesis statement နှင့် form
စာရေးတယ်ဆိုတာက တဦးနဲ့တစ်ဦးမတူပါဘူး။ Formal ကျကျရေးတတ်ဖို့လိုတဲ့အပြင် ကိုယ်ပိုင် ပုံစံ၊ ကိုယ်ပိုင် အသံနဲ့ ရေးတတ်တာပိုကောင်းပါတယ်။ Essayအများကြီးဖတ်ရတဲ့ စာစစ်သူတွေက ပုံစံတစ်မျိုးပဲရေးတဲ့ ကျောင်းသားတွေထက်၊ ကိုယ်ပိုင်ပုံစံရေးနိုင်တဲ့သူကို သူတို့ပို အထင်ကြီးတာပေါ။ English စာကို နက်နက်နဲနဲသုံးလာတဲ့ UK, US, Canada, New Zealand, Australiaတွေတောင် သူတို့ သုံးနေကျစတိုင်တွေက ကွဲပါတယ်။ ဒါကြောင့် Thesis (သို့) personal opinion ကို ဘယ်လိုပုံစံရေးရမလဲမေးရင် ရေးလို့ရတဲ့နည်းပေါင်းများစွာရှိတယ်ပဲပြန်ဖြေရပါလိမ့်မယ်။
Thesis statement လို့သုံးမယ်ဆိုရင် နားလည်မှုတွေလွဲနေတတ်လို့ မသုံးတာကောင်းပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ research writing အမျိုးမျိုးတွေထဲမှာလည်း UKနှင့် US နှစ်ခုထဲကြည့်ရင်တောင် ရေးနည်းတွေကလည်းမတူသလို့ နားလည်မှုတွေလည်း အမျိုမျိုးရှိတတ်လို့ပါ။ IELTS မှာဆိုရင် Thesis statement ဆိုတာနဲ့ “opinion ပါတဲ့ စာကြောင်း” ဆိုပြီး ပြီးစလွယ် နားလည်ထားတာကမှားပါတယ်။ ရှင်းရှင်းပြောရရင် thesis statement က ကိုယ့်ရဲ့ thesis ပါရမယ်။ ကိုယ်ရဲ့ thesis ဆိုတာက လာမည့် Body paragraphs တွေမှာရေးရမည့်–၁. ကိုယ်သက်သေပြရေးသွားရမည့် “idea”, ၂. ပရိတ်သတ်တွေကို ဆွဲဆောင်းသိမ်းသွင်းလိုတဲ့ အချက်တွေ၊ ၃. မဆိုင်တဲ့ idea (သို့) ကျယ်လွန်းတဲ့ ideaတွေကို ကျဉ်းအောင်းလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ (controlling idea) အချက်တွေအပြင်, ၄. ကိုယ့်ရဲ့ opinion နှင့်် judgment တွေထဲ့လို့ရတဲ့ အပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
controlling idea ဆိုတဲ့ ဉပမာ ကြည့်ရအောင်။ I am going to discuss about “Education”လို့ပြောရင် အရမ်းကို ကျယ်ပြန့်လွန်းပါတယ်။ စာအုပ်ပေါင်းမြောက်များစွာရေးလို့ရပါတယ်။ High School Education လို့ပြောရင်လည်း နည်းနည်းတော့ ပိုကျဉ်းလာပေမယ့် စာအုပ်မြောက်များစွာထပ်ရေးရပါလိမ့်မယ်။ “The effectiveness of No (2) Basic high school education in Mindat, Chin Sate”ဆိုရင်တော့ တစ်နှစ်လောက်နဲ့ research ရေးလို့အဆင်ပြေပါတယ်။ ဒီအပိုင်းလေးတွေကို ပိုကျွမ်းကျင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ စနစ်တကျသင်ပေးနိုင်တဲ့ ဆရာ/မများနဲ့ ထပ်လေ့လာပါ။
IELTS သင်ပေးတဲ့ ဆရာ/မတွေက သင်ပေးတဲ့ စတိုင်တွေ ကွဲရင်လည်းကွဲကြမှာပေါ့။ တစ်ချို့က thesis ကို intro မှာရေးပါ။ တချို့က conclusion မှာရေးပါ စသည်ဖြင့် ပြောကြလိမ့်မယ်။ ပြဿနာတော့မရှိပါဘူး။ အရေးအကြီးဆုံးက ကိုယ်ငြင်းရမည့်အချက်တွေကို ကောင်းကောင်းရေးပါ (you develop an argument), နိဂုံးကို ရှင်းရှင်းလေးနဲ့ အဆုံးသတ်ပါ (reachaclear conclusion), Body paragraph တွေရေးတဲ့နေရာမှာလည်း ကိုယ့်ရပ်တည်ချက်/ ကိုယ့်အထင်အမြင်ကို ရှင်းရှင်းလေး ရေးသွားပါ (make your position clear throughout your essay). ဒါတွေအားလုံးကို Thesis statement တစ်ခုထဲမှာ အကုန်ရေးလို့ လုံးဝမရနိုင်ဘူးလေ။
English သုံးတဲ့နိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့ ကျောင်းတွေမှာရေးနေကြ ပုံစံကတော့
၁. နိဒါန်း – ကိုယ်ရေးမည့် ခေါင်းစဉ်ပါတဲ စာပုဒ်နဲ့စပါ ( begin with an introduction that briefly introduces the topic )
၂. စာကိုယ်(Body paragraph)ကို ၂ပိုဒ်မှ ၃ပိုဒ်အထိရေးပြီး ကိုယ့်ရဲ့ main points တွေကို တင်ပြရေးရမည် ( write2or3body paragraphs that present, and explain your main points)
၃. နိဂုံး -ကိုယ့်ရဲ့ပြောပြီးသား အချက်တွေကို paraphrase လုပ်ပြီး၊ ကိုယ်ရပ်တည်တဲ့ အပိုင်းကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြန်ပြောပေးတဲ့ အပိုင်း (finish withaconclusion that summarises your main points, and makes your position clear)
မှတ်ချက်။ ။ Body Paragraph က ၂ပိုဒ်/၃ပိုဒ်/ သို့မဟုတ် ဒါထက်လည်း ပိုရင်လဲပိုနိုင်တယ်။ ဒီလောက်မှ ဒီလောက်ဆိုပြီးစဉ်းစားရင် ideaပြောစရာများပေမဲ့ လျှော့လိုက်ရတာတို့၊ နည်းတဲ့ဟာကို စာပုဒ်ပြည့်အောင် ထပ်ထပ်ပြောနေတာတို့နဲ့ အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ပါ။
နောက်မှ Introductionကို scope/position ဘယ်လိုချုပ်/ချဲ့/ချရေးရမယ်၊ body မှာ ideaတွေကို ဘယ်လို စီပြီး ဘယ်လိုထိထိရောက်ရောက်ရှင်းပြမယ်၊ conclusion မှာ ဘယ်လိုရေးရမယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းတွေကို နောက်အချိန်ရမှ ထပ်ရေးပေးပါအုံးမယ်။